Waatan Sababta Dhabta Ah Ee Dhibaatada Alexis Sanchez Ku Haysata Man United Tan Iyo Ka Bixitaankiisii Arsenal. – GOOL24.NET
Waatan Sababta Dhabta Ah Ee Dhibaatada Alexis Sanchez Ku Haysata Man United Tan Iyo Ka Bixitaankiisii Arsenal.
Xidiga xulka qaranka Chile iyo kooxda Manchester United ee Alexis Sanchez ayaa tan iyo markii uu ka baxay kooxdiisii hore ee Arsenal waxa uu ku dhibtoonayaa in uu dib u helo qaab ciyaareedkii cajiibka ahaa ee uu ku soo bandhigi jiray dhamaan kooxihii uu waayihiisa ciyaareed uu soo maray.
Tababarihii hore ee kooxda Arsenal ee Arsene Wenger oo xalay falanqaynayay kulankii Juventus iyo Manchester United isla markaana soo fadhiistay beIN Sports ayaa si buuxda sharaxaad uga bixiyay sababta dhabta ah ee dhibaatada Alexis Sanchez ku haysata Manchester United.
Arsene Wenger ayaa sheegay in nooca qaab ciyaareedka Alexis Sanchez uu yahay mid ku dhisan wax bilaabida ciyaarta iyo in uu qaab tamar badan u wajaho ciyaartoyda difaaca wuxuuna Wenger sheegay in Sanchez uu kalsoonidiisii lumiyay taas oo saamayn badan ku yeelata ciyaartoyda hanaankooda ciyaareed qaabkiisa oo kale yihiin.
Dhibaata Sanchez ku haysata Man United ayuu Wenger ku tilmaamay kalsoonidii oo ka luntay taas oo keentay in uu lumiyo tamartii iyo awoodii jidh ahaaneed ee uu ku shaqyan jiray markii ay Arsene Wenger wada shaqaynayeen.
Arsene Wenger oo sharaxaya xaalada Sanchez ayaa yidhi: “Awooda Alexis Sanchez waa in uu qaato bilawga gambiska iyo in uu dadka si toos ah uga hor yimaado. Kuwaasi waa ciyaartoyda ugu nugul marka ay ciyaarta kalsoonideeda lumiyaan ee taas ku salaysan. Isaga oo dareenkaas leh in uu qaato bilawga, waxa uu si gaabi ah ulumiyay taas”.
Arsene Wenger oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Tan iyo bilawgii xili ciyaareedka waxa uu lahaa heerka tamar jidh ahaaneed oo aad u saraysa laakiin sidoo kale taas ayuu isagu lumiyay”.
Arsene Wenger oo ahaa tababarihii Alexis Sanchez keenay Premier league iyo kooxdiisii hore ee Arsenal ayaa si cadeeyay in kalsoonida luntay ee Alexis Sanchez ay keentay in xataa uu lumiyo tamartii jidh ahaaneed ee uu caanka ku ahaa.